Movies – Page7– Trend.com.mm
The Teen Choice Awards ပွဲမှာ ဆုရရှိသွားတဲ့ “Riverdale” သရုပ်ဆောင်များ
By hninayehlaing - August 15, 2017 Leave your thoughts
Riverdale ဇာတ်လမ်းတွဲကို မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင် အခုပဲကြည့်လိုက်ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ Riverdaleရုပ်ရှင်ဟာ လူငယ်ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲရုပ်ရှင်ဖြ�…
Author hninayehlaingPosted on August 15, 2017 Categories Hollywood, MoviesLeaveacomment on The Teen Choice Awards ပွဲမှာ ဆုရရှိသွားတဲ့ “Riverdale” သရုပ်ဆောင်များ
မင်းသားရိန်းရဲ့ ရိုက်ကွင်းကို ထရပ်ကားတစ်စီးစာကော်ဖီနဲ့အအေးတွေပို့ပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးချောလေး ကင်တေးဟီ
By popo - August 15, 2017 Leave your thoughts
နာမည်ကျော်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မင်းသားရိန်းအတွက် သူ့ရဲ့ ဇနီးချောလေးကင်တေးဟီက ချစ်ခြင်းတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဘ�…
Author popoPosted on August 15, 2017 Categories Korean, MoviesLeaveacomment on မင်းသားရိန်းရဲ့ ရိုက်ကွင်းကို ထရပ်ကားတစ်စီးစာကော်ဖီနဲ့အအေးတွေပို့ပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးချောလေး ကင်တေးဟီ
By popo - August 14, 2017 Leave your thoughts
၂၀၁၇ နှစ်အတွင်း ထူးချွန်သူရွေးချယ်တဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ၁၉ကြိမ်မြောက် Teen Choice Awards ဆုပေးပွဲမှာ ဆုရရှိခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်၊အေ�…
Author popoPosted on August 14, 2017 August 14, 2017 Categories Movies, NewsLeaveacomment on ၂၀၁၇ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်၊အကောင်းဆုံးမင်းသား၊မင်းသမီးဆုရရှိခဲ့သူများ
ကြည့်နေကြကားတွေထက် ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ စိတ္တဇရုပ်ရှင် ”Mother!” Trailer
By hninayehlaing - August 9, 2017 Leave your thoughts
Mother! ရုပ်ရှင်ဟာ အမေရိကန်စိတ္တကားဖြစ်ပြီး ဇာတ်ညွှန်းနဲ့ ဒါရိုက်တာက Darren Aronofsky ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သူတွေက Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris နဲ့ M…
Author hninayehlaingPosted on August 9, 2017 Categories Hollywood, MoviesLeaveacomment on ကြည့်နေကြကားတွေထက် ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ စိတ္တဇရုပ်ရှင် ”Mother!” Trailer
ဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအတွက် ရိုက်ကူးမယ့် ဇာတိမြေ ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးခွင့်ရတဲ့ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း
By Pyone Thinzar Yi - August 9, 2017 Leave your thoughts
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင် ဟာဆိုရင် ဂျပန်မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအတွက် ရိုက်ကူးမယ�…
Author Pyone Thinzar YiPosted on August 9, 2017 August 9, 2017 Categories Interviews, Interviews, Movies, YollywoodTags Featured, ကြည်ဖြူသျှင်Leaveacomment on ဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအတွက် ရိုက်ကူးမယ့် ဇာတိမြေ ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးခွင့်ရတဲ့ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း
ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းထဲရောက်သွားသလို ခံစားစေရမယ့် စကော့တလန် မှ နေရာ(၁၁)ခု
By hninayehlaing - August 4, 2017 Leave your thoughts
၁.)Kenmore ရှိ စကော့တလန် Crannog Centreမှာ ထိုတဲအိမ်တည်ရှိပါတယ်။ [embed]https://www.instagram.com/p/BW5mp2WAeoQ/[/embed] ၂.)Edinburgh က Dean ရွာလေး [embed]https://www.instagram.com/p/BVEc-CCDBps/[/embed] ၃.)Glasgow တက္ကသိုလ်မှ…
Author hninayehlaingPosted on August 4, 2017 Categories Hollywood, MoviesLeaveacomment on ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းထဲရောက်သွားသလို ခံစားစေရမယ့် စကော့တလန် မှ နေရာ(၁၁)ခု
ကလေးဘဝတည်းက ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ကြောင်နဲ့ကြွက်ကာတွန်းကားလေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကြောင်နဲ့ကြွက်ဇာတ်ကားဆိုတာနဲ့ လူတိုင်းအလိုလိုနေကြမှာပါ။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲလေးဟာ စိတ်ကူးကောင်းပြီး ပါဝင်တဲ့ဇာတ်ရုပ်လေးတွေကို …
Author hninayehlaingPosted on August 4, 2017 Categories MoviesLeaveacomment on ကလေးဘဝတည်းက ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ကြောင်နဲ့ကြွက်ကာတွန်းကားလေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ရန်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့ကြည့်ရှုရမယ့် ”The Battleship Island ”
By hninayehlaing - August 2, 2017 Leave your thoughts
The Battleship Island ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၇ တောင်ကိုရီယားက Hwang Jung-min, So Ji-sub, Song Joong-ki နဲ့ Lee Jung-hyun တို့ ပီပြင်စွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ Hashima ကျွန်းမှာ…
Author hninayehlaingPosted on August 2, 2017 Categories Korean, MoviesLeaveacomment on ရန်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့ကြည့်ရှုရမယ့် ”The Battleship Island ”
တောသူမကာရိုက်တာကို သရုပ်ဆောင်ရတာ ခက်ခဲတဲ့အတွက် ငြင်းလေ့ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အဆိုတော်ပိုပို
By Pyone Thinzar Yi - July 28, 2017 Leave your thoughts
အဆိုတော်ပိုပိုဟာ အခုဆိုရင်ဂီတပိုင်းတင်မကပဲ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုပါခြေလှမ်းစနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီး…
Author Pyone Thinzar YiPosted on July 28, 2017 July 28, 2017 Categories Interviews, Movies, YollywoodTags Featured, ပိုပိုLeaveacomment on တောသူမကာရိုက်တာကို သရုပ်ဆောင်ရတာ ခက်ခဲတဲ့အတွက် ငြင်းလေ့ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အဆိုတော်ပိုပို
အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် Singel Singel Singel ပါလို့ပြောတဲ့ အဆိုတော် ရဲလေး
By Pyone Thinzar Yi - July 27, 2017 Leave your thoughts
အိမ်ထောင်ကျပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို (၂)နှစ်လောက်နား အခုအချိန်မှာတော့ အရင်ကထပ်ပို ကြိုးစားပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်နေတယ်လို�…
Author Pyone Thinzar YiPosted on July 27, 2017 July 27, 2017 Categories Interviews, Interviews, Lifestyle, Movies, Music, YollywoodTags Featured, ရဲလေးLeaveacomment on အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် Singel Singel Singel ပါလို့ပြောတဲ့ အဆိုတော် ရဲလေး
” Carambola or starfruit ” လို့ခေါ်တဲ့ ကြယ်သစ်သီးအကြောင်းသိကောင်းစရာ
ကော်ဖီချစ်သူတွေအတွက် ကော်ဖီပေါ်မှာအလှဆင်ဆွဲနိုင်မယ့် ချစ်စရာ 3D ဒီဇိုင်းများ
TOTO ကုမ္ပဏီမှ အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ ၂ဝ၁၇ရဲ့အကောင်းဆုံး အိမ်သာဒီဇိုင်း
ကလေးပုံလေးတင်ပြီး ကလေးအဖေဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ ဂန်ဂယ်ရီ
ခံတွင်းနံကောင်းအောင် နေ့စဉ်ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အချက်များ